မကြာမီလာတော့မယ့် Xiaomi ရဲ့ Brand အသစ် …. - Lu Gyi Min - Cell Phone Villa
မကြာမီလာတော့မယ့် Xiaomi ရဲ့ Brand အသစ် ….
Xiaomi သုံးစွဲသူများ… Xiaomi နှစ်သက်သူများကတော့ မကြာခင်မှာ ရွေးချယ် ဝယ်ယူစရာ Xiaomi ရဲ့ Brand တစ်ခု တိုးလာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတောင်မှ Xiaomi နဲ့ Redmi ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်တွင်းဈေးကွက်ထဲမှာ နောက်ထပ် တိုးလာမယ့် Xiaomi ရဲ့ Brand အသစ်က ဘာများဖြစ်မလဲဗျာ.. ဘယ်လို စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့ ထွက်ရှိလာမှာလဲ ဆိုတာတွေက စိတ်ဝင်စားစရာ ပါပဲ…။
တရုတ်ပြည်ဈေးကွက်မှာလည်း Online နဲ့ Offline ဆိုပြီး စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်တွေ ရှိပါတယ်။ Xiaomi ကတော့ Online ကို အဓိကထား စောင်းပေးရောင်းချပါတယ်။ Offline (မြေပြင်ဈေးကွက်) မှာတော့ သူဟာ သိပ်နေရာ မရခဲ့ဘူးလို့ gsmarena news အရ သုံးသပ်ရပါတယ်။ Offline မှာတော့ ခြေစွာပြီး ဈေးကွက်ကွန်ရက်ကောင်းတာကတော့ BBK Electronics Company ရဲ့ Oppo နဲ့ Vivo ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Xiaomi ရဲ့ Brand အသစ်ဟာ Oppo နဲ့ Vivo ကို မြေပြင်ဈေးကွက်မှာ ယှဉ်ဖို့နဲ့ ဈေးကွက် ပြန်လည်ရယူဖို့ Sub-Brand အနေနဲ့ မကြာခင်မှာ မိတ်ဆက်တော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။ မိတ်ဆက်ပေးမယ့် စမတ်ဖုန်းကတော့ Oppo R11, One Plus5 တို့နဲ့ ဆင်တူပြီး ကင်မရာပိုင်းမှာလည်း တူနေမယ်လို့ သိရပါတယ်။ iPhone7ရဲ့ Antenna Band Design မျိုးလည်း သူ့မှာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Xiaomi အနေနဲ့ သူရဲ့ Sub-Brand ဟာ ဘယ်လို အမည်နာမမျိုးလည်း ဆိုတာတော့ မထုတ်ဖော်သေးပါဘူး။ ဒီလကုန်မှာတော့ Brand အသစ်ကို Offline မှာ ဈေးကွက်အနိုင်ယူဖို့ မိတ်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပါ….
လူကြီးမင်းပရိသတ်ကြီးကရော.. Xiaomi ရဲ့ Sub-Brand အသစ်ကို အားပေးအုံးမှာလားဗျာ…
More in this category: « Samsung Galaxy C7 (2017) မှာ Dual Camera တပ်ဆင်တော့မည်ဟု သတင်းထွက် “လူသိနည်းတဲ့ Touch Screen အလုပ် လုပ်ပုံ” »